Zvikamu muLinux Vakapindwa muropa
Linux Kupindwa muropa ndeye blog iyo inoporesa yako Linux kupindwa muropa ... kana kuidyisa. Nekuti Linux izere zvakasikwa izere neanoshanda masystem, zvishandiso, graphical nharaunda uye ese marudzi esoftware ayo vazhinji vedu tinofara kuyedza. Pano isu tichataura nezveese izvo software uye nezvimwe zvakawanda.
Pakati pezvikamu zveLinux Vakapindwa muropa iwe unowana ruzivo nezve kugoverwa, nzvimbo dzemifananidzo, kernel yaro uye ese marudzi emapurogiramu, pakati pazvo tichava nematurusi, hofisi otomatiki, multimedia software uye zvakare mitambo. Kune rimwe divi, isu tiri zvakare yazvino nhau blog, saka isu tichashambadza zvitsva kana zviri kuuya zvinoburitswa, zvirevo, mabvunzurudzo uye ese marudzi eruzivo ane hukama neLinux.
Izvo iwe zvauchazowanawo uye hazvifanire kushamisa ndezvimwe zvinyorwa zvinotaura nezveWindows, Microsoft's operating system iyo inonyanya kushandiswa pasi pano mune desktop desktop. Ehe, mazhinji ezvinyorwa izvi anofanirwa kufananidzwa nemusoro mukuru weblog iri. Iwe une ese aripo zvikamu, anovandudzwa zuva nezuva neyedu yekunyora timu, zvichitevera.
Misangano / Zviitiko / Hurukuro